Atrikasa « Africa Endevor » : jerena manokana ny fifandraisana ho fiarovana ny fampandrosoana | NewsMada
Atrikasa « Africa Endevor » : jerena manokana ny fifandraisana ho fiarovana ny fampandrosoana
Nisokatra ? nanomboka omaly hatramin’ny 26 aogositra izao ny atrikasa « Africa Endevor » atao eto Antananarivo. Mitarika izany ny tafika amerikanina misahana ny fiarovana aty Afrika, US Africa Command (AFRICOM). Nanokatra ny fotoana ny filoha Rajaonarimampianina Hery sy ny vice–amiral, Michael Franken, avy amin’ny tafika amerikanina.
Hetsika fanao isan-taona ny Africa Endevor, izay sambany atao eto Madagasikara. Jerena manokana momba ny fifandraisana sy fifampizaram-baovao, ifanampiana eo amin’ny fiarovana ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy. Nomarihina indrindra ny ady atao amin’ny fanakorontanana sy ny fampihorohoroana. Koa tanjona amin’ny atrikasa momba ny fifandraisana ny hahafahan’ny mpitarika ao amin’ny Fiarovana mizaha akaiky sy manadihady ny fahaiza-manaon’ny miaramila ao aminy, hamolavolàna fiofanana sy fomba fiasa manaraka ny vanim-potoana ankehitriny eo amin’ny fivoaran’ny teknolojian’ny fifandraisana.
Mandritra izany atrikasa izany, mandinika ny olana eo amin’ny fifandraisana sy ny fifampizaram-baovao ireo mpandray anjara, miady hevitra momba ny hampiharana fomba fiasa vaovao, fampiofanana sy fitandroana ny fandriampahalemana amin’ny alalan’ny teknolojia momba ny fifandraisana. Firenena 40 ny mandray amin’izany, ankoatra ny tafika avy any Etazonia sy avy aty Afrika, ao koa ny avy any amin’ny kaontinanta hafa.
Nanomboka ny taona 2006 hatramin’izao, maherin’ny 2.000 ireo manampahaizana manokana momba izany avy amin’ireo firenena 40 ireo. Eto Madagasikara, manana fitaovana ampy mifandraika amin’izay fivoaran’ny teknolojian’ny fifandraisana izay ve anefa ny Foloalindahy malagasy ? Mifandanja amin’ny fahamaroan’ny manam-boninahitra ambony sy jeneraly ve ny fitaovan’ny Tafika malagasy ?